on: 02 Sep, 2017
စိတ်ကယောင်းကတမ်းဖြစ်ခြင်းရောဂါသည် စိတ်ကျန်းမာရေးကို အပြင်းအထန် ထိခိုက်စေခြင်းဖြင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးစေခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။ကယောင်ကတမ်းဖြစ်စဉ်လက္ခဏာများ(က) ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမသိခြင်း (၁) ဘယ်ရောက်နေ ဘာဖြစ်နေမှန်မသိ (၂) အာရုံမစိုက်နိုင်၊ စိတ်ကလေနေသည် (၃) မေးလျှင်မဖြေနိုင်၊ သူ့မှာ အာရုံကများနေသည်...
အိပ်ငွေ့ချခြင်းသည် စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုထုံးတစ်ရပ်အဖြစ် ပါဝင်သည်။ အိပ်ငွေ့ချကုထုံးဖြင့် စိတ်ကျန်းမာရေးယိုယွင်းသူများကို အကူအညီများစွာ ပေးနိုင်သည် ဖြစ်ပါသည်။ အိပ်ငွေ့ချခြင်းကို တချို့က Magic (မှော်အတတ်၊ မျက်လှည့်ပညာ) ဟု ထင်မှတ်မှားနေတတ်ကြသည်။ အိပ်ငွေ့ချခြင်း Hypnosis မှာ Magic တစ်ခု လုံးဝမဟုတ်ပါ။ အိပ်ငွေ့ချခြင်းသည် လူနာအား သင့်အပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှု စုစည်းစေပြီး ယုံကြည်မှုရရှ...
on: 12 Aug, 2017
Insomnia ဆိုသည်မှာ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်မပျော်သည့် ရောဂါအခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီး သူတိုင်း အိပ်မပျော်ခြင်းကို အနည်းနဲ့ အများ ခံစားဖူးကြသည်။ Insomnia တွင် အိပ်ပျော်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ အိပ်ပျော်သော်လည်း မကြာခဏ နိုးခြင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် ၂ မျိုးလုံး ဖြစ်ပေါ် ခံစားရခြင်းများ ရှိနိုင်သည်။ အိပ်ပျော်ခြင်း ကောင်းစွာမဖြစ်သည့်အခါ မနက်ခင်းတွင် လန်းဆန်းခြင်း မရှိဘဲ၊ စွမ်းဆောင်မှုများလည်း ကျဆင်းနိုင်သည်။&...
ယခုအခါ မက်ဒီတေးရှင်း (Meditation) ဟူသော စကားလုံးသည် လူအများနှင့် ယဉ်ပါးနေသော စကားလုံး ဖြစ်ပါသည်။ မက်ဒီတေးရှင်းဆိုသည်မှာ အာရုံတစ်ခုတည်း အပေါ်၌ စိတ်တည်တံ့နေအောင် သတိကပ်ထားသော အလေ့အကျင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ဂါထာမန္တန်တစ်ခုကို အာရုံစိုက် ရွတ်ဖတ်နေခြင်း ၊အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်သို့ မမှိတ်မသုန် စူးစိုက်ကြည့်နေခြင်းနှင့် မိမိယုံကြည်ကိုးစားရာအာရုံတစ်ခုခုကို သတိနှင့် မလွတ်တမ်းအာရုံပြုနေခြင်း စသည့် အလေ့အကျင့...
လူ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်သည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ရှက်ဖွယ်ကောင်းသော အပြုအမူတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်မိသည်ဟူ၍ လည်းကောင်း ယူဆပြီး မိမိကိုယ်မိမိ တန်ဖိုးမရှိသူဟု ခံစားနေရခြင်းသည် အပြစ်စွဲစိတ် ခံစားမှုဖြစ်၏ ။အပြစ်စွဲစိတ် ခံစားနေရသူတွင် တွေ့မြင် ရတတ်သည့် လက္ခဏာတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြသည်။၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ခြင်း - အမှားတစ်ခု ကျူးလွန်မိခြင်း၊ ရှက်ဖွယ်ကောင်းသော အလုပ်...
ဘာကြောင့် Transgender ဖြစ်ချင်တာလဲ
Transgender ဆိုတာ လူတွေထဲက လူတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ သူ ့ကိုယ်သူ လိင်မှားပြီး မွေးဖွားလာခဲ့တာလို့အယူအဆရှိနေသူ ဖြစ်ပြီး အဲဒီမှားယွင်းနေတဲ့ လိင်ကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပြီး စိတ်အလိုဖြည့်ထားတဲ့သူတွေပါ။ လိင်ပြောင်းလူသားတွေပေါ့။သူတို ့တွေဟာ Heterosexual၊ Homosexual၊ Bisexual၊ Asexual စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ သူတို ့ကို တတိယလိင်လူသား(third gender) တွေလို ့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။ Transge...
ကစဉ့်ကလျားဟူသော မြန်မာစကားသည် ဖရိုဖရဲဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေမျိုးအတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိသောစကားများ ဖြစ်ပါသည်။ အနောက်တိုင်း ဆေးပညာတွင် Schizophrenia ဆိုသည့် ရောဂါတစ်မျိုးရှိပါသည်။ မြန်မာလို စိတ်ကစဉ်ကလျားရောဂါဟု ပြန်ဆိုကြပါသည်။ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ တွင်မူ စိတ်လုပ်ငန်းများသည် မူမမှန်ဖြစ်ကြ၏။ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေကြ၏။ စိတ်သဘောထားများ မမှန်ကန် ဖောက်ပြန်နေခြင်းကြောင့် အပြောအဆိုနှင့် အမ...
Dementia (သတိလက်လွတ် ဖြစ်ခြင်း)
Dementia ရောဂါသည် မှတ်ဉာဏ် ချို ့ယွင်းခြင်း၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်ဉာဏ် လျော့နည်းလာခြင်းဖြစ်ပြီး နေ ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပါ ထိခိုက်သည်အထိ လူမှုဆက်ဆံရေးအား အနှောင့်အယှက် ပေးနိုင်ပါသည်။လက္ခဏာများDementia ၏ လက္ခဏာများသည် ဖြစ်ပွားစေသော အကြောင်းရင်းကို လိုက်၍ ပြောင်းလဲတတ်သော်လည်း အဖြစ်များသော လက္ခဏာများမှာ(၁) သိမြင်မှုဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုမျာ...
Illness anxiety disorder (မကျန်းမာမည်ကို အစိုးရိမ်လွန်ခြင်း)
on: 25 Jun, 2017
အကျဉ်းရှင်းလင်းချက်မကျန်းမာမည်ကို အစိုးရိမ်လွန်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်သော စိတ်ပူပန်မှုဖြစ်ပြီး မိမိ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မည်ကို အစိုးရိမ်လွန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ လူနာထံတွင် ကြီးမားပြင်းထန်သော ရောဂါလက္ခဏာ မရှိသော်လည်း(သို့မဟုတ် သာမန် နေထိုင်မကောင်းသောလက္ခဏာများအား) အလွန်အမင်း အစိုးရိမ်လွန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်မှ သေချာစွာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ရောဂါ ကြီးကြီးမားမားမရှိကြောင်းပြောထားသော...
စိတ်ကျရောဂါ ဆိုသည်မှာ ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းနှင့် အရာရာတိုင်းအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ပျောက်ဆုံးခြင်းကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ခံစားနေရခြင်းကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။လက္ခဏာများ စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရသော ဝေဒနာရှင်သည် အောက်ပါဝေဒနာများကို နေ ့တိုုင်းလိုလို ခံစားနေရတတ်ပါသည်။ ၎င်းတို ့မှာ. ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ငိုကြွေးချင်ခြင်း၊ လစ်ဟာနေသလို ခံစားနေရခြင်းနှင့် မျှော်လ...